Thola izingubo zezinja ebusika | Izinja Umhlaba
Izingubo zezinja: amamodeli ebusika
USusy fontenla | | Izesekeli zezinja
La izingubo zezinja Sekuthandwa kakhulu, futhi namuhla singathola imiklamo eminingi kangangokuba kusile. Leli bhizinisi linenzuzo ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezinhlobo ezincane. Lezi zinhlobo zamathoyizi zisetshenziswa cishe njengamathoyizi ngabanikazi bazo, zigqokise sengathi zingabantu. Kukhona ukweqisa okungafanele kweqewe, ngoba akumele sikhohlwe ukuthi bayizilwane, nokuthi bayajabula begijima enkundleni, futhi abagqoki ngemfashini yakamuva.
Yize kunezimpikiswano, kufanele kuthiwe ingxenye enkulu yalokhu izingubo zezinja yebo kuyasiza. Namuhla kungenzeka ukuthi ube neChihuahua ePyrenees, kepha lokhu akuyona imvelo yenja. Kungakho kunezinhlanga ezizokwenza njalo ngidinga ijazi elingeziwe, ezingagqoki ngokwemvelo. Ngaphezu kwalokho, umswakama ungalimaza izinja ezindala, okwandisa izinkinga ezifana ne-dysplasia noma i-osteoarthritis. Kulokhu, isixazululo ngamajazi emvula.
Uma ungomunye walabo abenqabelayo ukugqoka inja yakho izingubo, cabanga ngokuthi ngabe isimo sezulu singamthinta noma cha. Uma ehlala ngokuphelele ngaphandle kwamajazi, pho-ke uphelele, kepha uma ubona ukuthi uyabanda, kufanelekile ukumgcina efudumele ebusika. Namuhla unayo amamodeli amahle futhi anamuhla, ngokuthanda. Izilwane ezifuywayo, ngokusobala, ngeke zikhathalele ukubomvana kunokububende, ngakho-ke uzozithengela umklamo. Ukwakheka nenduduzo kufanele kukhethwe nguye.
Ukwazi ukuthi ngabe yi- ijazi elifanele, ungazama ngaphambili. Uma izizwa ingakhululekile noma ingalingani, zama amanye amasayizi noma amamodeli. Ngaphezu kwalokho, kungaba lula ukuthi ukujwayele kusukela ebuncaneni, noma kamuva kuzoba nzima kuwe ukuzivumelanisa nezimo. Futhi uma ungomunye walabo abakuthokozelayo ukugqoka isilwane sabo, akumele ukhohlwe ukuthi baseyizinja ezinomzwelo wemvelo. Myeke ajabulele futhi angcolise ukudlala nezinye izinja.
Imininingwane engaphezulu - Kuza amakhaza: thenga amajazi enja
Izithombe - KukasWorld
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izingubo zezinja: amamodeli ebusika
Thola ama-feeder wangempela
UCarolina Herrera wethula iqoqo elisha leNja